'जित-हारको मनोविज्ञान त्यागेर काठमाडौंको विकास र समृद्धिमा लागौं'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
त्यसैले मेयर र उपमेयर बनेका साह र डंगोललाई आफ्ना योजनाहरू पूरा गराउन कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती छ । आगामी योजना र चुनौतीका सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डंगोलसँग ईकान्तिपुरका लागि गोविन्द पोखरेलले गरेको कुराकानी :
काठमाडौं महानगरपालिको उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभयो ।आगामी दिनहरुमा तपाईं कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम म सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले जितमा उत्साहित हुनेभन्दा पनि तपाईंहरुले म माथि गर्नुभएको परीक्षामा सफल हुनै पर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएको अनुभूति बढी गरेकी छु । तपाईंहरुले मलाई विश्वास गरेर हरेक मतपेटिकामा खसालेका मतपत्रलाई मैले पाँच वर्षे कार्यकालका लागि दिएको कार्यभारका रुपमा ग्रहण गरेकी छु । म मेरो कार्यकालमा तपाईंहरुले दिनुभएका कार्यभारहरु इमान्दारिताका साथ कर्तव्यनिष्ठ भई पूरा गर्न लागिपर्नेछु ।
स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर वालेन्द्र साह र तपाईंले काठमाडौंको विकास र प्रगतिका लागि निर्वाचनकै घोषणापत्रमा उल्लेख योजनाहरु हुन्छन् कि नयाँ ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
मैले आफ्ना योजनाहरु निर्वाचनका दौरानमा नै गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा सार्वजनिक गरिसकेकी छु । ती योजनाहरु नै काठमाडौं महानगरपालिकाको योजना तथा बजेटमा समावेश गर्नेछु ।
तपाईं पार्टीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयरलाई 'असहयोग हुनसक्ने' आशंका छ नि !
निर्वाचनपछि मतगणना सम्पन्न भई परिणाम प्राप्त भएसँगै जित–हारको मनोविज्ञानलाई त्यही अन्त्य गर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । जित–हारको मनोविज्ञानलाई त्यागेर अब काठमाडौं महानगरको विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई अघि बढाउने प्रण पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरु पनि तत्‌अनुरुप अघि बढौं भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
काठमाडौंको विकास र समृद्धिका लागि म कुनै पनि ठाउँमा बाधक बन्ने छैन ।निर्वाचनमा मैले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पनि सम्बन्धित सबैसँग सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नेछु र सबै मिलेर यो काठमाडौं महानगरलाई साँच्चिकै स्वच्छ, सुन्दर, जीवन्त, व्यवस्थित र सांकृतिक नगरका रुपमा थप विकास गर्न दत्तचित्त भई लागि परौं भन्ने पनि आह्वान गर्न चाहन्छु ।
तपाईंहरु जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने काम कहिलेबाट महानगरवासीले देख्न पाउनेछन् ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेटमा मेरा योजनाहरु समावेश भएपछि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कामहरु यही आर्थिक वर्षदेखि नै देख्न पाउने हुनेछ ।
उपमेयर भइरहँदा न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पनि तपाईंलाई आउनेछ । यसका लागि के-कस्ता तयारीहरु गर्नुभएको छ ?
न्याय निरुपण सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समितिको हुन्छ । उक्त समितिमा मेरो नेतृत्वमा म सहित ३ जना सदस्य रहन्छन् । यस समितिको स्थानीय तहमा भएका विवादहरुलाई समाधान गर्ने मुख्य दायित्व हुन्छ । विवाद निरुपण गर्दा सर्वप्रथम मेलमिलापलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । मेलमिलापबाट भएन भने सामान्य प्रकारको विवादहरुमा यस समितिले निर्णय पनि गरिन्छ । यदि जटिल प्रकारका विवादहरु छन् भने न्यायका लागि अदालत पठाउने गरिन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम न्यायिक समिति नै गठन गर्नु पर्दछ । सो काममा म सुरुका दिनदेखि नै लाग्नेछु ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १७:२६